Infographics သည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလူကြိုက်များသနည်း။ အရိပ်အမြွက်: အကြောင်းအရာ, ရှာဖွေရေး, လူမှုရေးနှင့်စကားဝိုင်းများ! | Martech Zone
ငါများများဝေမျှရန်တသမတ်တည်းကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်သင်တို့အများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ကိုလာရောက်ကြသည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး infographics။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုငါချစ်တယ်။ infographics သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိသည်။
မြင်သာသော - ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏ထက်ဝက်သည်အမြင်အာရုံကိုမြှုပ်နှံပြီးကျွန်ုပ်တို့ကျန်ရှိသည့်အချက်အလက်များ၏ ၉၀% သည်အမြင်အာရုံဖြစ်သည်။ ပုံဥပမာများ၊ ဂရပ်များနှင့်ဓာတ်ပုံများအားလုံးသည်သင်၏ ၀ ယ်သူအားဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အရေးကြီးသည့်ကြားခံတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူ ဦး ရေရဲ့ 65% အမြင်အာရုံသင်ယူသူဖြစ်ကြသည်။
မှတ်ဉာဏ် - လေ့လာမှုများကိုတွေ့ပြီ သုံးရက်အကြာတွင်အသုံးပြုသူသည်စာဖြင့်ရေးသားထားသောသို့မဟုတ်ပြောသောအချက်အလက်များ၏ ၁၀-၂၀% သာကျန်ရှိသည်၊ သို့သော်အမြင်အာရုံအချက်အလက်များ၏ ၆၅% နီးပါးရှိသည်။
ဂီယာ - ၁၃ မီလီစက္ကန့်သာကြာသောရုပ်ပုံများကို ဦး နှောက်ကမြင်နိုင်ပြီးတစ်နာရီလျှင်ကြည့်ရှုသူ ၃၆၀၀၀ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကတစ် ဦး ၏အဓိပ္ပာယ်ရနိုင်သည် အမြင်အာရုံမြင်ကွင်း ထက်နည်း 1/10 တစ်စက္ကန့်နှင့်ပုံရိပ်ယောင်ဖြစ်ကြသည် 60,000X ပိုမြန်လုပ်ငန်းများ၌ စာသားထက် ဦး နှောက်၌တည်၏။
ရှာရန် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ infographic တစ်ခုသည်ပုံမှန်အားဖြင့် web တစ်ခုလုံးမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်နှင့်မျှဝေရန်လွယ်ကူသောပုံတစ်ပုံတည်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့်၎င်းတို့သည်လူကြိုက်များမှုကိုတိုးပွားစေသည့် backlinks များနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သင်ထုတ်ဝေလိုက်သောစာမျက်နှာ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ရှင်းလင်းချက် - ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည့်အချက်အလက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များသည်အလွန်ခက်ခဲသောကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကိုယူပြီးစာဖတ်သူကိုအမြင်အာရုံဖြင့်ရှင်းပြနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လမ်းညွှန်စာရင်းတစ်ခုကိုရယူခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်လမ်းကြောင်း၏မြေပုံကိုကြည့်ခြင်းတို့၏ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။
လမ်းညွန် - သရုပ်ဖော်ပုံများပါသောလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်လျှောက်သူများသည်ပုံဥပမာမပါဘဲလိုက်လျှောက်သူများထက် ၃၂၃% ပိုကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြင်အာရုံသင်ယူသူများဖြစ်ကြသည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် - ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည့်အချက်အလက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များသည်၎င်းကိုဖွင့်လှစ်သောစီးပွားရေးအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်သက်ဆိုင်ရာကွန်ရက်စာမျက်နှာများပေါ်ရှိသင်၏အဖွဲ့အစည်းအတွက်အမှတ်တံဆိပ်ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း။
စေ့စပ်ထားခြင်း - လှပသောသတင်းအချက်အလက်များသည်စာသားတစ်လုံးထက် ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ လူများသည်စာသားများကိုမကြာခဏစကင်ဖတ်စစ်ဆေးလေ့ရှိသော်လည်းဆောင်းပါးတစ်ခု၏ပုံရိပ်များကိုသာအာရုံစိုက်ပြီး၎င်းတို့ကိုလှပသောအရုပ်စာများဖြင့်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းအခွင့်အလမ်းပေးသည်။
တည်းခိုချိန် - သင်၏ဆိုဒ်ကိုစွန့်ပစ်သော Vis ည့်သည်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၂-၄ စက္ကန့်အတွင်းထွက်ခွာသွားသည်။ visitors ည့်သည်များကိုဆွဲဆောင်ရန်ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အချိန်တိုတောင်းသောကြောင့်အချိန်နှင့်အမျှအမြင်အာရုံနှင့်ရုပ်ပုံများသည်သူတို့၏မျက်လုံးများကိုဖမ်းယူရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
မျှဝေခြင်း - ရုပ်ပုံများကိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်စာသားအသစ်များထက်ပိုမိုမျှဝေကြသည်။ Infographics ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်နှစ်သက်ကြသည် ၂.၂ ဆပိုများပါတယ် အခြားမည်သည့်အကြောင်းအရာအမျိုးအစားထက်။
နောက်တစ်ခေါက် - ကောင်းမွန်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ထုတ်သောစျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်သူတို့၏အရောင်းတင်ဆက်မှု၊ ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများ၊ စာရွက်ဖြူများ၌ဆလိုက်များအတွက်ဂရပ်ဖစ်များကိုပြန်လည်နေရာချထားနိုင်သည်သို့မဟုတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောဗီဒီယို၏အခြေခံအုတ်မြစ်အတွက်ပင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပြောင်းလဲခြင်း - ကောင်းမွန်သောသတင်းအချက်အလက်တိုင်းသည်လူတစ် ဦး အားအယူအဆအားဖြင့်လျှောက်လှမ်းပြီး၎င်းတို့အားခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ပြ2နာ၊ ဖြေရှင်းနည်း၊ ကွဲပြားခြားနားမှု၊ ကိန်းဂဏန်းများ၊ ထောက်ခံစာများနှင့်ခေါ်ဆိုမှု -၂၀၁ လှုပ်ရှားမှုများကိုပုံတစ်ပုံတည်းဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သောကြောင့် BXNUMXB စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားများသည် Infographics ကိုလုံးဝနှစ်သက်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များအတွက်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် infographics များကိုရေးဆွဲသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းအရာတွင်ထည့်သွင်းရန် infographics ကိုရှာဖွေသည့်ဝဘ်ကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေသည်။ သင်၏ဆောင်းပါးတွင်အခြားသူတစ် ဦး ၏သတင်းအချက်အလက်နှင့်သင်၏အကြောင်းအရာသည်မည်မျှကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့နှင့်သင်ချိတ်ဆက်သောအခါ (သင်အမြဲတမ်းထားသင့်သည်) ပါဝင်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအတွက်ကျွန်ုပ်ပေးပို့သောကျွန်ုပ်၏လတ်တလောသတင်းအချက်အလက်သည်သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုဖြစ်သည် ကလေးငယ်တွေသွားတိုက်တဲ့အခါ Indianapolis ရှိကလေးများအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သောသွားဆရာဝန်အတွက်။ infographic သည်ကြီးမားသောထိခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်ရှိတည်နေရာစာမျက်နှာ၏ထိပ်ဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ သူတို့၏အသစ်တင်ထားသော site သို့လည်ပတ်မှုအားလုံး၏ထက်ဝက်ကျော်ရှိသည်။
ဆက်သွယ်ရန် DK New Media တစ် ဦး Infographic သည်
Tags: ဘာသာပြောင်းလမ်းညွန်အချိန်နေပါစေ့စပ်ထားခြင်းရှင်းပြချက်image ကိုဂရပ်ဖစ်အင်ဖိုinfographic စာရင်းဇယားသတင်းအချက်အလက်ထုတ်လွှင့်သတင်းအချက်အလက်ဂရပ်ဖစ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Infographicsမှတ်ဉာဏ်ပြန်လာခဲ့မယ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimizationseoမျှဝေခြင်းမြင်သာသောအမြင်အာရုံသင်ယူမှု
စက်တင်ဘာ 10, 2013 မှာ 8: 23 AM
သူတို့ကို ၀ င်ရောက်သမျှအလုပ်များကိုနှစ်သက်ရမည်၊ သို့သော်စာပြန်ခြင်းသည်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်။
"ရှာဖွေရေးအကျိုးစီးပွား peek" ?????
စက်တင်ဘာ 10, 2013 မှာ 10: 52 AM
ဧပြီ 23, 2014 မှာ 5: 30 pm တွင်
မင်္ဂလာပါဒေါက်ဂလပ်။ မင်းရဲ့ဆောင်းပါးကိုငါကြိုက်တယ် ဒေတာများကိုမြင်သာစေရန်အတွက် ပိုမို၍ လူကြိုက်များသောဤကိရိယာနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအချက်အလက်များအမြောက်အများရှိသည်။ ငါ infographics ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသရုပ်ပြရန်ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းထက်ငါစဉ်းစားလို့မရဘူး။ မင်းရဲ့အကြောင်းအရာအပိုင်းကိုငါမှီခိုအားထားတယ်။ မင်းငါ့ကိုကြည့်လို့ရမယ်ထင်တယ် https://medium.com/inbound-marketing-clinic-at-nyu/61033a96ea78။ Karinne
ဧပြီ 23, 2014 မှာ 7: 09 pm တွင်
စက်တင်ဘာ 26, 2015 မှာ 2: 35 AM
infographics ၏ဂရိတ်စုဆောင်းခြင်း! ငါပုံပြင်များမှတပါးဘာမျှမသုံးဘဲဖြတ်ပြီးပုံပြင်တစ်ခုလုံးကိုရတဲ့ကိုချစ်။ ဒါတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် သူတို့ကသေချာပေါက်ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုကြီးထွားလာနေပါတယ်!
18:2015 pm မှာအောက်တိုဘာ 11, 38
စကားမစပ်ငါအသက်ဘယ်လောက်ရှိသလဲလို့စဉ်းစားနေရင်ငါကတစ်ဆယ့်တစ်နှစ်ပဲ၊ အလုပ်ကောင်း Mr Douglas !!!!!!!!!!!!!
18:2015 pm တွင်အောက်တိုဘာ 5, 50
ဒါက Amalshah ပဲ။ မှတ်စုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်ရှေ့တွင်တောက်ပသောအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုရှိသည်။